Champion League: Barcelona oo 2-1 kaga adkaatay Manchester City | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Champion League: Barcelona oo 2-1 kaga adkaatay Manchester City
Champion League: Barcelona oo 2-1 kaga adkaatay Manchester City
Barcelona ayaa Etihad Stadium guul mihiim kaga gaadhay kooxda Manchester City, waxayna Barcelona guushan ku gaadhay laba gool oo uu Luis Suarez udhaliyay qaybta hore ee ciyaarta halka Man City uu goolka udhaliyay Sergio Aguero. Laakiin dhamaadkii ciyaarta ayuu Lionel Messi kooxdiisa ka qasaariyay rekoodhe waxaana ka badbaadiyay hoolhaye Hart. Clichy ayaa casaan la siiyay kadib markii uu qaatay laba kaadh oo digniin ah.
Kooxda Manchester City ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah Etihad Stadium ku soo dhawaynaysay kooxda Barcelona. Man City ayaa isku diyaarinaysay inay uugu ayraan Barcelona shabaqeeda ka ilaashato, wuxuuna Pellegrini sheegay in ay ku farxi doonaan haddii ay ciyaartu ku dhamaato barabro gool la’aan ah ama barbaro 1:1 ah.
Laakiin Barcelona ayaa doonaysay inay sidii xili ciyaareedkii hore ay goolal ku dhaliso garoonka Citizens, Wuxuuna Enrique sheegay in haddii ay Man City kubbada kula dagaalanto inuu kulan xiiso badan noqon doono haddii kale oo ay kubbada u daayaana inay ka sii fiicnaan doonto.
Barcelona ayaa ciyaarta ku bilaabatay kubbad hayn badan halka Man City bilawday inay is taxadar leh iskaga ilaaliso kubbadaha halista ahaa ee Barcelona. Barcelona ayaana ciyaarta ku bilaabatay qaab ciyaareed layaableh, waxayna halis joogto ah ku abuurtay difaaca City.
Daqiiqadii 16 ayay xaalada ciyaartu is badashay kadib markii ay Barcelona heshay fursada ay hogaanka ciyaarta kula wareegtay. Luis Suarez ayaa kooxdiisa Barcelona udahliyay goolka furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Barcelona hogaanka kula wareegtay. Suarez ayaa kubbad uu ku dhex helay xerada ganaaxa City si fiican lutga bidix ugu darbeeyay kubbad wuxuuna si fiican kubbada u daba mariyay goolhaye Hart.
Barcelona ayaa sii laba jibaartay weerarka ay ku haysay goolka City, waxayna fursado halis ah kadib ay markale daqiiqadii 30 aad heshay fursada labaad ee ay kula timid goolka labaad, waxaana markale Barcelona goolka labaad udhaliyay Luis Saurez, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Barcelona hogaanka ku dheeraysatay.
Kubbad uu khadka dhexe ka soo jiitay Lionel Messi oo la soo dhaafay dhawr ciyaartoy oo Man City ah ayuu dhinaca bixid ugu dhiibay Jordi Alba, laakiin Alba ayaa kubbad la sugay inta ay weerarka Barcelona soo galayeen weerar, wuxuuna ugu danbayn kubbada soo hormariyay goolka City, waxaana kubbad si fiican shabaqa City si fiican ugu hubsatay Suarez oo markale indhaha caalamka xaday.
Barcelona ayaa bilawday inay Man City ka ilaashato kubbada, waxaana qaab ciyaareed layaableh muujinayay Messi oo khadka dhexe si fiican uga ciyaarayay halka Man Citay ay ku adkaatay inay kubbad si fiican iskugu dhibtaan marka ay helaan.Markasta ayay Barcelona halis ku ahayd goolka City. Suarez ayaa iska qasaariyay fursad dahabi ah oo uu ku dhamysan tiri lahaa Saddexley. Messiu ayaa isaguna fursad qaali ah laga badaadiyay halka Alves uu birta garaacay.
Dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta ayay Man city bilawday inay weerar ku qaato goolka Barcelona, waxaana markii labada gool laga dhaliyay isbadalay qorshahoodii ciyaarta, taas oo keentay inay weeraro halis ah bilawday. Samir Nasri iyo Aguero ayaa fursado fiican laga badbaadiyay. ugu danbayn qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:0 ay Barcelona ciyaar ahaan iyo natiijo ahaanba ugu gacan saraysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Man City bilawday halistii ugu badnayd, waxayna weeraro halis laakiin goolkaye Ter Stegen ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay fursado goolal loo fishay. Fursada ugu halista badnayd kooxdiisa City goolka kowaad ugu dhalin gaadhay Dzeko. Dzeko ayaa kubbad koorne ahayd isaga oo goolka Barca hortaagan si fiican madax ugu darbeeyay kubbada laakiin Ter Stegen si fiican uga badbaadiyay.
Kadib markii ay Man City fursado fiican oo badan abuurtay kadib ayay daqiiqadii 69 aad la timid goolkeeda kowaad waxaana udhaliyay Sergio Agüero, kaas oo ciyaarta ka dhigay 2:1 ay wali Barcelona hogaanka ku hayso. Kubbad uu Silva soo tuuray ayuu Aguero ka xoogay difaaca Barca wuxuuna kooxda u soo nooleeyay rajada dhulka ka taalay.
Laakiin Man City ayuu dhib horlihi soo gaadhay daqiiqadii 74 kadib markii ciyaarta laga saaray Gael Clichy kaas oo kaadhkiisa labaad ee digniinta ahaa ku qaatay Alves, waxayna intaa wixii ka danbeeyay ku ciyaarayeen 10 ciyaartoy.Barcelona ayaan qaybtii danbe ee ciyaarta soo bandhigin qaab ciyaareedkii layaabka lahaa ee ay soo bandhigtay 45 kii daqiiqo ee hore.
Intii lagu jiray waqtiga dheeriga ah ayaa Barcelona lagu abaal mariyay rekoodhe kadib markii uu Zabaleta uu qalad ku galay Lionel Messi oo ku jiray xerada ganaaxa Man City, laakiin Joe Hart ayaa Messi ka badbaadiyay rekoodhahaas halka uu markale Messi kubbada ka soo booday inta uu madaxa ku darbeyay uu dhinac ka mariyay goolka City. ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Barcelona guul mihiim ah ay kaga gaadhay City.
Hart ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay gool kale oo dhibaato ku noqon lahaa lugta danbe, Man City ayaa kulanka lugta danbe ee Champions Leaque Barcelona ku soo booqan doonta gurigeeda Camp Nou,